मोदीलाई फेरी पनि ज्यान मार्ने धम्की,मोदीको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाईएको, कसले दियो धम्कि? – " कञ्चनजंगा News "
मोदीलाई फेरी पनि ज्यान मार्ने धम्की,मोदीको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाईएको, कसले दियो धम्कि?
No Comments on मोदीलाई फेरी पनि ज्यान मार्ने धम्की,मोदीको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाईएको, कसले दियो धम्कि?
एजेन्सी । असार–८, भारतमा यदि सबैभन्दा धेरै असुरक्षा कसैलाई छ भने ती हुन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफनो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका मोदीको सुरक्षामा भारतले कुनै पनि चुक अहिलेसम्म गरेको छैन ।
हिन्दु कट्टरवादी नेता , मुस्लिम बिरोधी भएको आरोप , आतंककारीहरुप्रति मोदीको अभिव्यक्ति लगायतका बिषयहरुको कारण नै मोदीलाई असुरक्षा बढि हुने गरेको विश्लेषण गरिन्छ त्यसबाहेक मोदीलाई मारिदिने धम्की त कति हो कति । यसैबीच मोदीलाई फेरी पनि ज्यान मार्ने धम्की आएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केरालको गुरुवायुर मन्दिरको यात्राको क्रममा रहेका मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको हो । मिडियाका अनुसार मोदीको यात्राकै क्रममा प्रहरीलाई एउटा खाम दिईएको थियो । जुन खाममा पाँच सय रुपैयाँको नोट जहाँ मलयालम र अंग्रेजी दुबै भाषामा मोदीलाई मार्ने धम्की दिईएको थियो ।
मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि सुरक्षा निकायमा हल्लीखल्ली नै मच्चियो । किनकी प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेको सुरक्षामा चुनौती दिँदै ज्यान मार्ने धम्की आउनुलाई सामान्य मानिन सकिन्दैन । त्यसैले मोदीको सुरक्षामा थप सतर्कता अपनाईएको छ ।
यता मोदीलाई कसले ज्यान मार्ने धम्की दियो भन्ने बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । त्यसो त मोदीलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको पहिलो पटक भने होईन । एजेन्सीको सहयोगमा
← नेपाल प्रहरीका हवल्दार दुई जना महिलाको हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा → मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर सहिद तथा घाइते भएका परिवारलाई सरकारले भैँसी प्रदान गर्यो